भोट कसरी हाल्ने ? स्थानीय निर्वाचन विशेष | Hamro Patro
गर्भवती, अशक्त, अपांगता भएका, बिरामी, जेष्ठ नागरीककालागि बेग्लै र पुरुष अनि महिलाका अन्य बेग्लै लाईन रहन्छ । यसप्रकारले तिनवटा लाईन रहन्छन् । त्यसपछि लाईन अनुसार मतदाता परिचयपत्र मिलाउने, मतदान गरेको व्यक्तिको हातको नङ्गमा चिनो लगाउने, तथ्याङ्क फारम भर्ने र मतपत्र लिने काम गरिन्छ । यी सबैकुराहरुको तठस्तता अनि पारदर्शिता हेर्न पछाडि सर्वदलीय मण्डली बसेको हुन्छ ।
स्थानीय निर्वाचन २०७४ अन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचनकोलागि तय भएको अाज विशेष दिन अर्थात अाज बैशाख ३१ । २० वर्षपछि जनप्रतिनिधिविहिन स्थानीय निकायको छनाैटकोलागि ३वटै प्रदेशका ३४ जिल्लाका मतदाता हाैसलाकासाथ मतदानकेन्द्र पुगेर मताधिकार प्रयोग गर्न शुरू गरीसकेका छन् । अाफ्नो प्रतिनिधि सबैजनाले मतदाता परिचय पत्र लिनुभयो त ? हाम्रो पात्रो मार्फत मतदान कसरी गर्ने अझ भनौ भोट कसरी हाल्ने भन्ने विषयमा केहि अावश्यक जानकारी लिअाैं ।
निर्वाचनको दिन हामीले के के गर्नपर्दछ अनि कसरी भोट हाल्ने भन्ने विषयमा तयार पारिएको यो ५ मिनेट अध्यन लेखमा स्वागत छ ।
अाज विहान ९ बजेदखि साँझको ५ बजेसम्म आआफ्नो स्थानीय तवरमा पूर्वनिर्धारित मतदान केन्द्रमा आफ्नो मतदाता परिचयपत्रकासाथ हामी पुग्नपर्नेछ । यसरी मतदानकालागि जाँदा घर परिवार अनि समूदायका अरुहरुलाई पनि राष्ट्र निर्माणको यो महान कार्यमा लैजान नभुलौं । यसरी मतदाता नामावलीमा यदी तपार्इको नाम छ भने मतदान केन्द्रमा जाँदा आफ्नो मतदाता परिचय पत्र बोकेर जान पर्दछ अथवा मतदाता परीचयपत्रमा कुनै त्रुटी छ वा अझै लिइसक्नुभएको छैन भने नेपाली परीचय खुल्ने नेपाल सरकारले जारी गरेको कुनै पनि कागजात बोकेर (सवारी लाइसेन्स, नागरीकता अादी) समेत अाफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
मतदान केन्द्रमा पुगेर आफ्नो मतदाता परिचयपत्र क्रमसंख्या थाहा पाउन जरुरी छ । निर्वाचन आयोग अन्तर्गत खटिएका कर्मचारीहरु अनि स्वंसेवीहरुले यसै मतदाता परिचयपत्र क्रमसंख्याका आधारमा हामीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनुहुनेछ ।
अब गरौँ त्यहाँ हुने लाईनका कुराहरु, हामीमध्ये धेरैलाई गएका वर्षको संविधानसभा चुनावहरुको अनुभव पनि छ भने कतिकालागि यो मतदान नै प्रथम मतदान हो । तर स्थानीय चुनाव र पहिलेका चुनावहरुमा लाईन र अन्य ब्यवस्था उस्तै भएतापनि मतदाता नामावली अनि मतदान गर्ने तरीका फरक हुन्छ है ।
अब कुरा गरौ मतपत्र लिईसकेपछिको, मतपत्रमा अगाडि बसेका मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर गरेपछिमात्र मत हाल्नकालागी आधिकारिक हुन्छ । उक्त मतपत्रमा अब तपाईले गोप्य रुपमा कुन चिन्हमा मतदान गर्न चाहनुभएको हो त्यस्तो चिन्हमा मत सङ्केत लगाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय चुनावमा प्रत्येक मतदाताले ७ जना जन प्रतिनिधी छान्न पर्दछ ।
गाउँ प्रमुख वा नगरप्रमुखका लागि एक मात्रै स्वस्तिक चिन्ह दिनुपर्छ । ठाडो लाइनमा लस्करै रहेका उम्मेदवारहरू मध्ये एक जनलाई मात्रै भोट दिनुपर्छ । त्यस्तै प्रमुखको लाइनपछि रहेको अर्को ठाडो लाइनमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरू हुन्छन् । त्यहाँ पनि एक जनलाई मात्रै भोट दिनुपर्छ । मतपत्रमा रहेको तेस्रोलाई वडा अध्यक्षको लाइन हो । त्यहाँ पनि एक जनालाई मात्रै मत व्यक्त गर्नुपर्छ । चौथो लाइन महिला वडा सदस्यको हो ।
त्यहाँ एक जना मात्रै महिला वडा सदस्यलाई भोट दिनुपर्छ । पाँचौ लाइन महिला दलित वडा सदस्यको लाइन हो । त्यहाँ पनि एक जनालाई मात्रै मत व्यक्त गर्नुपर्छ । छैठौं र सातौं लाईन अन्य दुई वडा सदस्यको लागि हो । सम्भवत त्यो लाइनमा पुरुष उम्मेदवार हुने छन् । ती दुई लाइनमा रहेका दुई जना उम्मेदवारलाई मात्रै भोट दिनुपर्छ ।
दुई लाइन मध्ये पहिलो लाइनकै दुई जनालाई पनि दिन सकिन्छ वा दोस्रो लाइनकै दुई जनालाई पनि दिन सकिन्छ । अथवा दुई वटा लाईनमा रहेका एक एक जनालाई मत दिँदा पनि हुन्छ । तर छैठौं र सातौं लाइनमा दुई ठाउँमा मात्रै स्वस्तिक चिन्ह लगाउनुपर्ने हुन्छ । स्वस्तिक छाप आफूले मन पराएको उम्मेदवारको चुनाव चिन्हको कोठामा लगाउनुपर्छ । र त्यो छाप अन्य कोठामा जानु हुँदैन ।
मतदानका बेला अर्को एउटा चुनौती र समस्या हो मत वदर हुने । चुनाव पछि सर्वदलिय प्रतीनिधीहरुको रहोवरमा प्रहरी प्रशाशनको रहोवरमा मतगणना गरिन्छ र यसो गर्न उक्त गाँउपालिका या नगरपालिकाका सबै मतदान केन्द्रबाट मदपेटिका आईपुग्नपर्दछ । आउनुहोस जानीराखौँ के के गरेमा म तबदर हुन्छ भन्ने कुराहरु
यो गरेमा मत बदर हुन्छः
१ मतपत्रमा पहिलो पाँच पदका लागि हरेक पदमा एक भन्दा बढी उम्मेदवारलाई मत दिएमा।
२ मतपत्रमा छैठौ र सातौं पदका लागि दुई कोलममा रहेका जुनसुकै दुई भन्दा बढी उम्मेदवारलाई मत दिएमा।
३ स्वास्तिक छाप नबुझिएमा वा लतपतिएमा।
४ मतपत्रमा अन्य छाप लगाएमा वा अन्य चिन्हले मत सङ्केत गरेमा।
५ दुई वटा निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठाको बीचमा पर्ने गरी स्वस्तिक छाप लगाएमा।
६ उमेरवारको चिन्ह रहेको कोठा भन्दा बाहिर स्वस्तिक छाप लगाएमा।
७ मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएमा।
आफ्ना मत बुझेकालाई मतदान गरौँ, कुनै अाकर्षण वा गफकै भरमा गलत जनप्रतिनिधि नछानिउन।